တွဲဖက်စားသောက်ခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်း မပြုသင့်သော အရာများ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » တွဲဖက်စားသောက်ခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်း မပြုသင့်သော အရာများ။
Posted by ခင်ခ on Oct 9, 2012 in Food, Drink & Recipes, Health & Fitness | 48 comments
အရင်တစ်ပတ်က ကျောက်ပန်းတောင်းဘက်မှာ သနပ်ခါးလိမ်းပြီး သနပ်ခါးပေတဲ့လက်နဲ့ ကလေးကို ပန်းသီးကျွေးမိတော့ ကလေးသေဆုံးသွားတယ်၊ အဲဒါကို ဖခင်ဖြစ်သူက မယုံလို့ ပန်းသီးနဲ့သနပ်ခါး ရောပြီးစားလိုက်တော့ ဖခင်လည်း သေဆုံးတယ်လို့ ဖေ့ဘုတ်မှာပျံလွင်နေခဲ့တဲ့ သတင်းကို သိကြပြီးဖြစ်မှာပါ။
အဲဒါကြောင့် ခင်ခ ဖေ့ဘုတ်ထဲကို အသိမိတ်ဆွေတစ်ယောက် share ပေးထားတဲ့ တွဲဖက်မစားသင့်သော ၊ မသုံးစွဲသင့်သော အရာများကို ပို့ပေးထားတာရှိလို့ လိုက်ရှာပြီး ရွာသူားများ ဖတ်ရအောင်ပြန် Share ပေးမိ တာပါ။ ဖတ်ပြီးတဲ့သူများရှိပြီးဖြစ်နိုင်သလို မဖတ်ရသေးတဲ့သူများလည်း ဖတ်ရအောင်ပါဗျာ။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိပေမယ့် ဗဟုသုတ အတွက်ပါဗျာ။
ဦးခင်ခရေ … အတော်ပါပဲ … အဲဒါလေးတွေကို သိချင်လို့ ၀ယ်မယ်လို့စဉ်းစားထားတာ အခုလို မျက်စိရှေ့ ကိုအရောက်ရေးပေးတဲ့သူရှိတော့ ပိုက်ဆံလည်းမကုန် အချိန်လည်းမကုန်ပဲ လိုချင်တာလည်းရသွားတာပေ့ါ … ကျေးဇူးပါပဲနော် share ပေးလို့…
စာလေးကျန်သွားလို့ … ချင်းဆိုတာ ဂျင်းကို ပြောတာလားမသိဘူး ?….
မခိုင်ရေ ချင်း = ဂျင်း ပါ။
ကြက်သားနဲ့ ကြက်ဟင်ခါးသီးကတော့ ခဏခဏ တွဲစားဖူးတယ် ဒါပေမယ့် အခုထိ ဘဝတစ်ပါး ကို stay permit နဲ့ သွားဖို့တော့ဗီဇာမကျသေးဘူး
ဦးဦးခင်ခရေ မကြားဖူးတဲ့ စားစရာတွေတော်တော်များတယ်ရှင့်
ဗဟုသုတတွေ ပြန်ရှယ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါနော် ..
အောက်ဘက်က တွဲဖက်မစားသင့်တဲ့ အစာတွေ အတွက်
ဗဟုသုတပေးတဲ့အတွက် ကျေးကျေးပါ ကိုခင်ခ ရေ…
သနပ်ခါးလိမ်းပြီး သနပ်ခါးပေတဲ့လက်နဲ့ ကလေးကို ပန်းသီးကျွေးမိတော့ ကလေးသေဆုံးသွားတယ်၊ အဲဒါကို ဖခင်ဖြစ်သူက မယုံလို့ ပန်းသီးနဲ့သနပ်ခါး ရောပြီးစားလိုက်တော့ ဖခင်လည်း သေဆုံးတယ်လို့ ဖေ့ဘုတ်မှာပျံလွင်နေခဲ့တဲ့ သတင်းကို သိကြပြီးဖြစ်မှာပါ။
ဟော သည့်ကိစ္စရယ် …။
HOAX ဖြစ်မှာ ကျိန်းသေသလောက် ရှိတယ်ဗျို့ …
အဲ့ဒါလေး အမှတ် မမှားစေချင်လို့ပါ..။
သမ္မာကျမ်းစာကတော့ ပန်းသီးဆိုတာ လူသားသမိုင်း အစ ကလို့ ဆိုတယ်..
ဒါဆို သနပ်ခါး က မြန်မာ့ သမိုင်း တောက်လျောက် ပါဝင်တဲ့ သတို့သမီးပေါ့ …
သည်နှစ်မျိုးစလုံး ဆိုင်ရာ သမိုင်းကြောင်းမှာ ဘာနဲ့ တွဲမစားရဘူးတို့ …
ဘယ်လို စားရင် သေတယ်တို့ ….အဆိပ်သင့်တဲ့ နာမည်ပျက် မရှိခဲ့စဖူး ..မကြားဖူးဖူးတဲ့
အရာ၂ခု မဟုတ်လားဗျာ ..အဲ … အဲ့လို အရာ ၂ခု တွဲစားတော့မှ ..
တိုက်တိုက်လေးရယ်မှ ဆိုင်ဆိုင် (Social Media ခေတ် ရောက်တော့မှ)
အနှီသတင်းကို လူတကာ ရှဲကြလို့ . ဖတ်ရ မြင်ရရဲ့ဗျာ …
သတင်း တစ်ပုဒ် လို သတင်းဓာတ်ပုံ စာသား အကြောင်းအရာ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းမှု
စတာတွေ တခုမှ မတွေ့ရဘဲ သနပ်ခါးတုံးနဲ့ ကျောက်ပြင် ပုံရယ် ပန်းသီးပုံရယ်ကိုပဲ
ပြသ ထားရှိတာကို မြင်မိကြောင်းပါ…။
ဆိုတော့ Hoax ဖြစ်ကြောင်း ပိုသေချာတယ်လို့ ပြောချင်ပါရဲ့…။
တကယ်လို့ ဒါဟာ သတင်းအမှန်ပါ လို့ ဆိုခဲ့ရင်တော့ …
၁။ ကျောက်မှုန့်တွေ သိပ်ထွက်လွန်းတဲ့ ကျောက်ပြင် ရယ်…။
၂။ သုံးတဲ့ရေ ရယ် .. က အကြောင်းရင်း ဖြစ်မယ် ထင်မိကြောင်းပါ။
အိုဘယ့် သနပ်ခါးနဲ့ ပန်းသီး ..။
P.S သနပ်ခါး သည် စားစရာမဟုတ်ပေ။
အပေါ်က စာရင်းထဲက တွဲမစားသင့်တာတချို့ ခဏခဏ စားမိပါတယ်၊
သေနေ့ဘဲ မစေ့ သေးလို့လား၊ အသီးအရွက်တွေရဲ့ ရသ ဩဇာ ကွာလို့လား မသိ၊
ဒါပေမဲ့၊ အသက်ဉဏ်စောင့် ….. ကြည့်ရှောင်မှ!
ကိုခင်ခရေ… တွဲဖက်မစားသင့်တာတွေကို ပြောပြပေးလို့ကျေးဇူးပါနော်….
တစ်ခု သတိရလို ပြောထားချင်လို့ပါ။
တွဲဖက်မစားနဲ့ ဆိုပေမယ့် စားရင်ဘာဖြစ်မလဲ? ဘာလို့မတည့်တာလဲ? ဘာ နဲ့ ဘာ နဲ့ကောတည့်သလား? တွဲဖက်စားမိပါတယ် ဘာမှမဖြစ်ပါလား? စတဲ့လား မေးခွန်တွေအတွက် ကွန်မန့်ပြန်ကြားရန် အစီအစဉ်မရှိပါ၊
ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခု Share သလောက်ဘဲ ကျွန်တော်လည်းသိလိုပါခင်ဗျ၊ ဗဟုသုတအဖြင့်သာ သိစေချင်လို့ တင်လိုက်ကြောင်းပါဗျာ။
ဒါတွေအကုန် ယူပြီး ပရင့်ထုတ်ပြီး ထမင်းစားခန်းမှာ ချိတ်ထားသင့်တယ်လို့ မနောယူဆလို့ ယူသွားပြီနော် ဦးဦးခင်ခ..
ကြိုတင်ကာကွယ်ပြီး အစားအစာကြောင့် ဒုက္ခမရောက်ရလေအောင် သိထားသင့်တာမို့
မသိသေးတာတွေတော်တော်ပါတာတွေ့တယ်. စက်ထဲကူးထားပါတယ်.. ကျမလည်း ကြက်သားဟင်းနဲ့ ကြက်ဟင်းခါးသီးကြော်လေးနည်းနည်း ကို မကြိုက်ပဲနဲ့သူများကြော်ထားတာကောင်းတယ်ဆိုပြီးမြည်းကြည့် တာ သေလုမျောပါးခံလိုက်ရဘူးတယ်. ဗိုက်တွေထဲပူတာများမခံနိုင်ဘူး. သင်္ဘောသီးနဲ့ဂျင်းဆိုလို့..တလောတုန်းက နယ်ဖက်ကမိဘမဲ့ဘော်ဒါတစ်ခုမှာ ငါးဒန်နဲ့သင်္ဘောသီးချက်တာစားပြီး ကလေးတွေအကုန်ဝမ်းသွားပြီးဆေးရုံရောက်ကြတယ်. ဆေးရုံက ဓါတ်ခွဲတော့ဟင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့တော့ပြောပါတယ်တဲ့. ဒါပေမယ့်ဟင်းထဲ ဂျင်းထည့်မိသလားမသိ ??
လောလောဆယ်တော့ သမီးကြိုက်တာတွေနဲ့ မတည့်တာတွေကို မှတ်သွားတယ်နော်…
နောက်ပြီး မှိုနဲ့ နို့နဲ့ မတည့်ဘူးလို့လည်း ဖတ်ဖူးတယ်…
လုံမလေးရေ နွားနို + မှို = သေ လို့တော့ရေးထားတဲ့ထဲပါ ပါ၏ ခင်ဗျ။
ဒီစာရင်းလေး ပြုစုပေးတဲ့ကိုခင်ခကို ကျေးဇူးအထူးပါ…
ဒီနေရာမှာ မှတ်မှတ်ရရ ရယ်စရာလေးတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်…
လွန်ခဲ့တဲ့ (၅)နှစ်လောက်က အိမ်မှာလက်ရေးလေးနဲ့ ရေးထားတဲ့မတည့်တဲ့အစားအစာတွေစာရင်းကို တွေ့ပါတယ်…
ခေါင်းစဉ်လေးက ” ရောမစားရသောအစားအစာများတဲ့…”
ကျွန်တော်လဲ ခေါင်းစဉ်လေးကိုကြည့်ပြီး အထူးစိတ်ဝင်စားသွားပါတယ်…
ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တာက “ရောမ စားရသော အစားအစာများ” တဲ့….
ရောမခေတ်တုန်းက ဘာအစာတွေစားကြလဲဆို စိတ်ဝင်တစားဖတ်လိုက်တော့ ပထမဆုံးတွေ့တာက
မှိုနဲ့ ဖားသားတဲ့… စိတ်ထဲမှာ ရောမတွေ ဖားသားကို မှိုနဲ့ရောချက်စားကြတယ်ထင်တယ်ပေါ့…
ဆက်ဖတ်တော့မှ မင်းကွတ်သီးနဲ့ သကြားတွေ့တော့မှ မဟုတ်သေးပါဘူးဆို ခေါင်းစဉ်ပြန်ဖတ်တော့မှ
အော် တော်သေးလို့ ခေါင်းစဉ်ကို တွဲဖက်စားသောက်ခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်း မပြုသင့်သော အရာများ။ လို့
တပ်ထားမိလို့ပေါ့။ ရောမစားရသောအစားအစာများ လို့စဉ်စားသေးတယ်၊ တစ်ချို့က စားစရာမဟုတ်ဘဲ အခြားအရာတွေပါနေလို့ အဲဒီလိုမရေးမိလိုက်တာ။ ရေးများ ရေးမိလို့တော့ ကိုကြောင်ဝတုတ် လက်ချက် အောက်မှာ ခင်ခ တော့ ပြားမပေါ့ဗျာ။
တိုတိုပြောရရင်.. ရန်ကုန်မှာ.. အဲဒီလိုပိုစတာတွေ ပုံနှိပ်စက်မှာတင်..ပုံနှိပ်.. ရောင်စားတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်ရှိခဲ့ဖူးတယ်..။ ကြာတော့ကြာပါပြီ..။
သူက.. အဲလို မတည့်တာတည့်တာ.. ဘာမှန်းမသိ.. စိတ်ကူးပေါက်တာ.. ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာကို.. ထည့်ရေးခိုင်းနေတာ ကြားဖူးတယ်..။
ဘိုးမင်းဂေါင်.. ဘိုးဘိုးအောင်.. သက်တော်ဘယ်နှထောင် ဘုန်းကြီးစသဖြင့်ပေါ့..
အဲဒါလည်း.. စိတ်ကူးပေါက်တဲ့ အသက်ရိုက်ထည့်.. ဒီဇိုင်းလုပ်တဲ့ကောင်လေးကို.. မီးတွေ.. အရိပ်တွေထည့်.. ဘုန်းကြီးကို.. ပါးနားရေတွန့်ခိုင်း.. ပြီးရင်.. ပိုစတာထုတ်တာပဲ..
နယ်က..အချပ်ရေ..သိန်းချီဝယ်ပါတယ်..။ အဲဒီတုံးက.. မဂိုလမ်းနဲ့.. ဗိုလ်ချုပ်လမ်းထောင့်နားကဆိုင်တွေမှာ.. စီးပွားဖြစ်ရောင်းကြ၀ယ်ကြပေါ့…။
နည်းနည်းနောနော ဈေးကွက်မှ မဟုတ်တာနော..။
ဖရဲသီးနဲ့.. အိုက်စကရင်း.. . ခွက်ထဲထည့်..ဇွန်းနဲ့ခလောက်ကြည့်တာ.. စားချင်စရာတော့ မကောင်း..
(ခဏတင်လုပ်စား လိုက်တာ.. )
သနပ်ခါးနဲ့ပန်းသီးလည်း.. အချိန်နည်းနည်းရ လုပ်စားကြည့်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း..
နောက်ရက်ကွန်မန့်မတက်လာရင်.. ကျုပ်သေရှာပြီး.. မှတ်ကြဖို့.. အကြောင်း…
အဲ..အဲ.. သနပ်ခါးအနှစ်(ရန်ကုန်ကမှာထားတာ) နဲ့.. ပန်းသီးဖျော်ရည်.. ပဲလောလောဆယ် ရှိတဲ့အကြောင်း..
တွဲဖက်မစားသင့်တဲ့ အစာတွေ အတွက်ဗဟုသုတပေးတဲ့အတွက်တော့ ကျေးကျေးပါ ကိုခင်ခခင်ဗျားလို့…
သူကြီးရေ အလုပ်များ မအားရင်တောင် နောက်ရက်ကွန်မန့်တစ်ခုတော့ မှီရာပိုစ့်မှာရေးနော် မရေးမိလို့ ကတော့ သိုလော သိုလော နဲ့ ဖြစ်တော့ မယ်ဗျ။ ကြည့်လည်းလုပ်ပါအုံးဗျ။
ဘာထူးလည်း..။ အခုလိုအင်တာနက်ကနေ.. စာရေးကြ..ပြောကြတာကို.. လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၁၀၀လောက်ကလူတွေ သွားပြောရင်.. သရဲတစ္ဆေ..နတ်လို့ ပြောကြမှာပဲ..
ဘိုးဘိုးအောင်.. ဇော်ဂျီအပါအ၀င်နတ်တွေ..နတ်တွေများ.. ။
တမလွန်မှာ မန်းဂဇက်အတွက် မင်န်ဘာရှာပြီး ပြန်ခဲ့မယ်..။
စားပြီးပြီ သနပ်ခါးနဲ့ ပန်းသီး မသေသေးဘူး ခုတော့ ။
နောက်ရက်တော့ မသိဘူး။ :mgreen:
ဖြစ်ပုံက ဒီလို မူစယ်က သူငယ်ချင်း က ပန်းသီး တွေ လက်ဆောင်လာပေးတယ်။ ကျွတ်တုန်းစားဆိုတာနဲ့ အမေက ခွဲပြီး အသင့်စားလို့ရအောင် စားပွဲပေါ် တင်ပြီး ထားထားတယ်။ အန်တီလေးက နေ့တိုင်း သနပ်ခါးမြစ်သွေးသောက်တယ် ။
အပူကင်းအောင် လေကောင်းအောင် ဆိုပြီး ခပ်ငယ်ငယ်ထဲက သောက်ကျင့်ရှိလို့ သောက်တယ်။ သူက ဆားလေးမှုန်မှုန်ထည့်သောက်မယ် ဆိုပြီး စားပွဲပေါ် သနပ်ခါးမြစ်သွေးပြီးသား ဇွန်းလေး လာတင်တယ်။ ကိုယ်က ပန်းသီးစိတ်ကို ယူတဲ့အချိန် သူ့ဇွန်းထဲ ကျသွားပါလေရော။
အဲ့တော့လည်း ဘာဖြစ်လည်း အောက်ကျတာမှ မဟုတ်တာပဲ ဆိုပြီး ပါးစပ်ထဲ ပြန်ထည့်တယ်။ ခါးသက်သက် ချိုချို ကျွတ်ကျွတ်လေး။
ပန်းသီးမွှေးမွှေးလေးနဲ့ သနပ်ခါးအနှစ်လေးအပြင် ပိုပြီးအနံ့လေးပြည့်စုံသွားအောင် ကရမက်ဖြစ်ဖြစ်… နံသာဖြူလေးဖြစ်ဖြစ် ရောထည့်ပြီးသောက်လိုက်နော်…ဟိဟိ
သို့ပေသည့် မန်းဂေဇက်ရဲ့ အက်ဒမင် ယူဇာနိမ်းနဲ့ ပတ်စဝေါ့ကိုတော့ ကျွန်တော့ဆီပို့ထားခဲ့ပါနော်…
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူကြီးကို ပြန်တမ်းဖတ်ပေးပါ့မယ်…
အဲဒါလေးမစမ်းခင် ဆုပေးပွဲမှာ မဲဖေါက်ဖို့လက်ဆောင်လေးများ ကြိုပို့ထားလို့ပဲ.. :harr:
(ဖရဲသီး နှင့် နို့ မျိုး
ဖရဲသီး နှင့် ဘဲဥ)
အဲဒါတွေက အပြင်မှာရောစားရင် မသေဘူး။
ဗိုက်ထဲမှာရောသွားမှ ဓါတ်ပြုပြီး အမြုပ်တွေထ အစာအိမ်ပြည့်ကျပ်ပြီးသေတာပြောတယ်။
သေချာချင်ရင်တော့ ဖရဲသီးစားပြီး နို့ ဒါမှမဟုတ် ဘဲဥစားကြည့်ပေါ့။
တချို့အစာအတွဲတွေက အပူ/အအေး ဓါတ်သဘာဝချင်းမတည့်တာ
တချို့အစာအတွဲတွေက ဆန်းသဘော/ ကက်ကင်းသဘော/ စသည်ဖြင့် ဝေဒနည်းအရ မတည့်တာ
တချို့အစာအတွဲတွေက (ဒုက္ခမပေးတောင်) မလိုလားအပ်တဲ့ အကျိုးတွေရတတ်လို့ မတည့်ဘူး ဆိုရတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ.. အဲ… အဲလိုကြားဖူးကြောင်း ကိုခင်ခရဲ့ ပိုစ့်လေးကို အားဖြည့်ဆွေးနွေးရပါတယ်ဗျာ…။
ဖရဲသီး နဲ့ ဘဲဥ လောက်ပဲ
တွဲဖက် မစားသင့်တာကို သိထားတာ ..
ခု ဦးခင်ခကြီး ရေးပြလိုက်မှ လား .. လား .. အားဂျီးပဲဟ .. ဆိုပြီး .. ဖြစ်တွားရပါလယ် ..
ခုလို ရေးပြတဲ့ ဦးခင်ခကြီးကို ကျေးဇူးပါ ဆိုတဲ့အကြောင်း ….
ထမင်းစားခန်းလေးထဲမှာ ကပ်ထားဖို့ 
အင်တာနက်ကနေ.. အမြန်ကုထုံးလေးနှိုက်ယူပြီး.. တင်ပေးလိုက်တယ်..
With signs of severe dehydration, such as dry mouth, decreased urination, dizziness, fatigue, or increased heart rate or breathing rate.
Remember Not to Eat These Foods Together with Eggs
သတ္တဝါတိုင်းရဲ့ အသွေးသားဖွဲ့စည်းပုံက တူမှမတူတာ
( ဖြစ်တတ်တယ် ) ဒီလိုဆိုနိုင်မလားဘဲ
ဆိုလိုတာက အချို့ကဟိုဟာနဲ့တဲ့ဒယ် ဒီဟာနဲ့တဲ့ဒယ် အဲ.. ဟိုဟာနဲ့ ဟိုဥစ္စာနဲ့ကျတော့မတည့်ပျံဘူး
ဟိုဒင်းနဲ့ ဟိုဒါကျတော့ တည့်တဲ့အခါတည့်တယ် မတည့်တဲ့အခါမတည့်ဘူး
စာရင်းချုပ်လိုက်တော့ တည့်တဲ့လူနဲ့တည့်တယ် မတည့်တဲ့လူနဲ့မတည့်ဘူးဟယ်
( ငါးကတစ်နဲ့ ကြာဟင်း ) လို့ဆိုထားတယ်
( ကြုံလို့ပါ ငါးဆိုတာကိုမွန်လို ( က ) လို့ခေါ်တယ် ကရင်လို ( ည ) လို့ခေါ်တယ် )
ကြာပင်ဆိုတာက ဘယ်လိုကြာအမျိုးအစားကိုပြောလည်း သိဘူး
အမှန်က ကြာပင်နဲ့ ငါးကို ချဉ်ဟင်းချက်စားနေကြတာဘဲ
( Bananas + sweet potato )
( Potatoes + bananas ) ((I can’t figure the translation for this one…sorry. Anyone willing to
try it out and let me know its effects?) တေဂျင်းဂျိုးရဲ့မတည့်ဘူးဆိုရင် ကိုယ့်ဖါသာစမ်းကြည့်ဘာလား
ဒဘိုင်းလောက်ရရင် ရဒဲ့ဒဘိုင်းနဲ့ အဲ့ဒါတွေကို အမြည်းလုပ်ပြမယ်
ဒါမှ တို့ သူကြီးကွ။
ရွာ မှာ မန်ဘာ တိုးရေး အတွက် ဖြတ်လမ်း နည်းသုံးတော့မယ်ပေါ့လေ။ ဉာဏ်သွားပုံများ။
တမလွန် က မန်ဘာ နဲ့ လက်ရှိမန်ဘာ Post တင်ဖို့ အရေအတွက် ဘယ်သူများ မလဲ စာရင်းပြုဖို့ မျှော်နေပါ၏။
လက်ရှိ မန်ဘာတွေ လက်သွေးထားကြဟေ့နော်။
စေတနာနဲ့ တင်ပေးထား တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ။
တစ်ချို့ အတွဲ တွေကတော့ မဟုတ်ဘူးထင်တာပါဘဲ။
ဒါပေသည့် သိထားတော့ ဆင်ခြင်လို့ ရတာပေါ့။
အဲလို တွဲမစားရ လို့လဲ သေမှာမှ မဟုတ်တာ။
မတော်လို့ စားမိလဲ Research လုပ်ပြီးဖြစ်တာပေါ့။
မှတ်တမ်းလေးတော့ ပို့ပေးသွားကြဦး။ :harr:
လေးခ ရေ လောလောဆယ်တော့
ကုလားမနဲ့ဝက်သား လို့ မန့်ခဲ့တယ်
မြန်မာတွေပြောပြောနေတဲ့.. “အသီးမှာသရက်.. အသားမှာဝက်” ဆိုတာ.. မူရင်း..ဟိန္ဒူကခင်ဗျ..။
ဘာသာရေးထိခိုက်သလိုဖြစ်ပါရင်… တောင်းပန်ကြောင်း.. :harr:
ကိုခရေ….။ တွဲဘက်မစားသင့်တဲ့ အစာက တစ်ခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ…။ လက်ဘက်နဲ့ အချိုမှုန့်တော့ တွဲမစားနဲ့ဗျို့…။ တစ်ရက်က ကျွန်တော့ဆိုင်မှာ လက်ဘက် ရောင်ဖို့ ချိန်ပါတယ်…။ လက်အိတ်ပါပါဘူး …။ လက်နဲ့ပဲ ကိုင်ပြီး ချိန်ရပါတယ်…။ အဲဒါပြီးတော့ စိနက လာတဲ့ အချိန်မှုန့် ထပ်ချိန်ရပါတယ်…။ ခါတိုင်းတော့ ဇွန်းနဲ့ ခပ်ပါတယ်…။ အဲဒိနေ့ကတော့ ဇွန်းက မအားတာနဲ့ စောစောကလက်ဘက်ကိုင်ထားတဲ့လက်နဲ့ပဲ အတိုးအလျော့လုပ်မိပါတယ်…။ ခဏနေတော့ ကျွန်တော့လက်ချောင်းတွေ မဲနေပါရောလား…။ အမေကပြောတော့ လက်ဘက်က ဆိုးဆေးနဲ့ အချို့မှုန့် မတည့်လို့ရှိမှာပေါ့တဲ့…။ ဆပ်ပြာမှုန့်နဲ့သုံးခါလောက်ဆေးတာတောင်မပြောင်ချင်သေးဘူး…။ ကျွန်တော်တို့ ဘုမသိဘမသိနဲ့ လက်ဘက်နဲ့ အချိုမှုန့် နယ်ပြီးစားလာကြတာကြာလှပါပကော………. အဲဒိလို စားလို့ ၀မ်းထဲကကလီစာတွေ ဘယ်လောက်များမဲနေပြီမသိ…………… လတ်တစ်လော ဘာမှမဖြစ်သေးပေမဲ့ ဘယ်အချိန်မှာ ဘာဖြစ်လာမယ်မသိ………….. ကျွန်တော်တော့ လက်ဘက်သုပ်ဆိုရင် ကြောက် ကြောက်ပဲ………
၀င်ရောက်ဆွေးနွေး ပြောဆို၊ဖြည့်ဆည်း ကွန်မန့်ပေးကြကုန်သော သူကြီးနှင့် ရွာသူားများကို ခင်ခ မှ ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ပါကြောင်းခင်ဗျ၊ တကယ်တွဲစားမိ သုံးစွဲမိရင် ဘေးဖြစ်စေမှာလား သေမှာလား ဆိုတာတော့ စားတဲ့အချိန် ကိုယ်ခံအားကောင်းခြင်းလုံလောက်မှု့ရှိခြင်း၊ မရှိခြင်း၊ အရွယ်အနေအထား၊ တွဲစားတဲ့ပမာဏ၊ အဲဒီတွဲစားခြင်းနှင့် အတူ အခြား ပူးပေါင်းစားတဲ့အရာ အဲလိုတွေလည်း အများကြီးစပ် ဆပ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်၊ တကယ်တည့် မတည့်ကတော့ ကျွန်တော်လည်း သေချာလေ့လာ ဖတ်ထား တာမျိုးမရှိလို့ အတိအကျမပြောတတ်ပါဗျ၊ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဗဟုသုတ အဖြစ်လေးဖတ်ထားသင့်တယ် ထင်လို့စုစည်းပြီးတင်ခဲ့တာပါခင်ဗျ၊ ကျွန်တော်တစ်ခုဘဲပြောနိုင်တာရှိပါတယ် သေချိန်တန်ရင်တော့
သေမှာပါဘဲလို့၊ ဘယ်လိုသေကြမယ်တာ သေချာမပြောနိုင်တာပါလို့။
ဖရဲသီးနဲ့ ဘဲဥ တွဲစားချင်သူများအတွက် .. :hee:
ဖရဲသီး ကို ထက်ခြမ်းခွဲပြီး ဘဲဥ ခေါက်ထည့်လိုက်ပါ..
အဲဒီ အမြှုပ်လေးတွေ ငြိမ်သွားပြီဆိုလျှင် စားကြည့်ပါ ….
ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင် ဘာမှ မဖြစ်လို့ပေါ့နော် …
ကောင်းပါလေ့ ကောင်းပါလေ့။ ဆွဲကြိုးချစရာ မလိုတော့ဘူး။ သေချင်ရင် မတည့်တဲ့ထဲက ကိုယ်စားချင်တာ လေးရွေးပြီးစား သေဖို့အိပ်ယာလေးကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေး ပြင်နဲ့အသက်ထွက်သွားရင် ယောက်ျားလေး ဆိုရင် နတ်သမီးလေးတွေ တစ်ဖက် လေးငါးရာ မိန်းကလေးဆိုရင် သိကြားမင်းရဲ့ မိဖုရားခေါင် ကြီး ဖြစ်လောက် ပါရဲ့လေး။
သေချိန်တန်ရင် သေမှာတော့ သေချာတာပေါ့နော်…
အချိန်မတန်ခင် အသက် ဥာဏ်စောင့် ဆိုသလို
စာထဲပါတာ အကုန်တော့လဲ ဟုတ်ဟန်မတူဘူး…
မနေ့ က ကွန်မန့် ရေးမရလို့ 
ဒီလိုပါ သနပ်ခါးလို့ ဆိုရာမှာ သနပ်ခါးနဲ့ အလွန်တူတဲ့  အပင်များစွာ
အနံ့့သာကွဲတာပါ ။ဒါကလည်း တော်ယုံလူမသိနိုင်ပါဘူး
ဒီတော့သနပ်ခါးကြောင့်လို့ ပြောရင်တော့ မမှန်နိုင်ပဲ သနပ်ခါးနဲ့ 
တူသောအပင်ရဲ့ အဆိပ်ကြောင့် ဆိုရင် မပြောတတ်ပါ ဗျာ
နေ၀န်းနီရေ လက်ဘက်နဲ့ အချိုမှုန့် ကတော့ သုံးစွဲခဲ့ကြပါတယ်၊ ဆိုးဆေးပါလို့ဖြစ်မယ်ထင်တာဘဲနော်။
ကိုဆာမိရေ သနပ်ခါးနဲ့ပန်းသီး မတည့်ဘူး အဆိပ်သင့်တယ်လို့တော့ အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ထဲ၌ စာရင်းထဲမှာတော့ မပါသလို၊ လိုက်မေးမြန်းစုံစမ်းတော့လည်း သေချာတဲ့အဖြေမရဘူးဗျ၊ ဖေ့ဘုတ်မှပျံနေလို့ အခုလို မတွဲဖက်ရအရာတွေ စုဆောင်းဖော်ပေးလိုက်တာလေ။ ကိုဆာမိပြောသလို ဖြစ်ပျက်စဉ်က သနပ်ခါး အစစ်လားဆိုတာလည်း တွေးစရာပါ။
kokothandar ရေ တစ်ခုအကြံပေးမလို့ စားပြီးတဲ့နေရာနဲ့ အိပ်ယာနဲ့ ကအလှမ်းဝေးခဲ့ရင် အိပ်ယာပေါ် မရောက်မှီမှဖြစ်သွားမှဖြင့်၊ ဒိလိုလုပ်ပါလား အိပ်ယာပေါ်မှာဘဲ စားပြီးအိပ်နေလိုက်ရင် ပိုမကောင်းဘူးလား။
မအိရေ စာထဲမှာပါတဲ့အားလုံးတော့ ဟုတ်မဟုတ်မပြောတတ်ပါ ကျွန်တော်လည်းသေချာမသိလို့
ရေးထားတဲ့အတိုင်း ကယ်ရီလုပ်ပေးလိုက်တာ၊ ဦးပါလေရာ ဖြည့်ပြီးမန့်ထာလေးလို ထင်ပါတယ်၊
သေချိန်တန်သေမှာပါ ဆိုတာက ကျွန်တော်နောက်ပြီးရေးထားမိတာပါ ခင်ဗျ စိတ်ဆိုးတော် မမူပါနဲ့ဗျ။
မေဂျူလိုင်ရေ ကျွန်တော်အသက်က စပယ်ယာမပါလို့ မစမ်းတော့ဘူးနော်။
ကျွန်တော်တို့ ဂေဇက် အရက်သမား သမဂ္ဂ၀င် များ ရှောင်နိုင် ရှားနိုင်လို့ ဒါလေးတွေကို ရွေးချယ်မှတ်သားသွားပါတယ် လေးခ ရေ..။
ကိုခင်ခရဲ့ တွဲမစားသင့် တဲ့ ထဲက တချို့ ကို တွဲ စား ဖူး သလို သဂျီး ရဲ့ အင်တာနက်ထဲက အတွဲ တစ်ချို့ လည်း စား ဖူး ပါတယ်။ ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့ လဲ လို့ သတိမထား မိပါဘူး။ ကိုယ့် ဘာသာ ကိုယ် အခန့် မသင့် လည်း ခေါင်း မူး၊ ခေါင်း ကိုက်၊ ဗိုက်နာ၊ ဗိုက်အောင့် က ဖြစ်တတ်တော့ ဘာတွေ စား မိလို့ ဘာ ဖြစ်တယ် လို့ တခါမှ မဆန်း စစ် မိပါ။
စားနေကြ မဟုတ်တဲ့ အစာ ကို စ စား မိရင် တော့ သတိထား ပြီးတခြား အဆိပ် အတောက် ဖြစ်နိုင် တဲ့ ဟာတွေ မစားပဲ နေဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ပြောရရင် မှတ်မှတ် ရရ ဒီ ရောက် စ ဆယ်လမွန် ခါး ကို စပြီး စား တဲ့ နေ့ က ဒညင်း သီးတွေ ပြုတ်ပြီးတော့ မှ တဲ့ ပါ့ မလား ဆို ပြီး မစား ပဲ ထား လိုက် ပါတယ်။ နောက် ပိုင်း မကြာ ခဏ စား ဖြစ် သွားတော့ ရဲ သွား ပြီး သတိတောင် မထား မိတော့ ပါဘူး။ အစား တစ်လုတ် အတွက် ရတက် မပွေ ရအောင် ကိုယ့် ကို ကိုယ် သတိ လေး ထား သွား ရင်တော့ အကောင်း ပေါ့။
မောင် R Ga တို့ စုစည်းချက်ကတော့ ကောင်းသဗျို့။
မိုချို ရေ သတိဆိုတာတော့ ပိုတယ်မရှိဘူးပေါ့ဗျာ။
ပန်းသီးနဲ့ သနပ်ခါး မတည့်ဘူးဆိုတာကတော့ ..
ခုနပဲ အစ်မ တစ်ယောက်ကပြောပါတယ်..
သနပ်ခါး မစစ်ရင် .. ဖြစ်တတ်တာပါတဲ့ ..
သနပ်ခါး အတု (သစ်ပုလွေ) သား က အဆိပ်ရှိတဲ့ အပင်ဆိုတော့ ..
ပန်းသီးနဲ့ မတည့်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဆိုပဲ …
အမြှ အမြှ အမြှ
ရွှေထီးကိုလဲမောင်မမျှော်မှန်းတယ် လို့ယူဆသူများ မှန်မမှန်သိရအောင်အများအကျိုးကိုမျော်ကိုးပြီး